Mpanamboatra avo lenta ireo fitaovana fantsom-boasary insulated —— Masinina Shanghai Jwell - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Mpanamboatra avo lenta ireo fitaovana fantsom-boasary insulated ——Sinjia Jwell Masinina
Fotoana: 2018-11-04 Hits:
Ny orinasa JWELL dia mamaly am-pahavitrihana ny fangatahan'ny tsena, ary manefa indray ny tsipika famokarana tsipika fanamafisam-peo fantsom-pandrefesana lehibe 2 metatra.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa Shanghai JWELL Pipe Equipment dia nanolotra andiam-pamokarana 14 hatrany amin'ny 2 metatra fantsom-pifandraisana savaivony lehibe ho an'ny tsena. Manana ny traikefa matotra matotra indrindra sy ny kalitaon'ny fampiorenana matanjaka!
Super caliber 2 metatra PE fantsom-pamokarana fantsom-pamokarana fantsom-pamokarana izay novokarina tao amin'ny SHANGHAI JWELL PIPE EQUIPMENT CO., LTD, dia manana toerana ambony eo amin'ny sehatry ny indostria, ary tokana sy vaovao ny endriny. Mampiasà extruder tokana mahomby avo lenta, automatique avo lenta, fandidiana mora, famokarana mitohy, marin-toerana ary azo itokisana.
Ny fantsom-panafody PE dia antsoina koa hoe fantsom-piarovana ivelany PE, fantsom-palitao, fantsom-tànana .Ny fandevenana mivantana ny fantsom-panafody PE dia miorina amin'ny sosona avo lenta polyethylene fiarovana ivelany, polyurethane henjana plastika insulation plastika sy vy fantsom-bokatra. ny hakitroka dia 60kg / m3 ~ 80kg / m3, fenoy tanteraka ny elanelana misy eo amin'ny fantsom-by sy ny fantsom-pantsaka, ary manana tanjaka azo antoka. Mamorona iray manontolo eo anelanelan'ny fantsom-by, ny fantsona ivelany ary ny sosona insulation. Ny sombin-tsolika polyurethane nalevina mivantana dia manana fantsom-panafenana mekanika sy mafana. Amin'ny toe-javatra mahazatra, afaka mahazaka hafanana marobe 120 ° C izy ary mahazaka hafanana marobe hatramin'ny 180 ° C amin'ny alàlan'ny fanovana na fitambarana fitaovana hafa.
Ny toetra mampiavaka ny fantsom-panafody PE
Ampiasaina betsaka amin'ny ranoka, tamba-jotra fandefasan-gazy, solika fitrandrahana fitrandrahana simika simika, simika, tamba-jotra fanafanana afovoany, fantsom-pivoaran'ny rivotra afovoan'ny centralair ary injeniera monisipaly.
● ambany ny vidin'ny tetikasa.
● Vitsy ny fibodoana tany, fananganana haingana ary fiarovana kokoa ny tontolo iainana.
● Ny fantsom-palitao dia mamonjy angovo, preservative, insulated tsara ary androm-piainana maharitra.
● Ny tsipika fanairana momba ny famoahana rehetra dia omena ho fiarovana. Raha vantany vao miseho ny fivoahana amin'ny fantsona iray, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny tsipika fanairana, dia azo aseho amin'ny fitaovana fanandramana manokana ny toerana marina sy ny haavon'ny fivoahan'ny fantsom-panafody, mba hampahafantarana ireo mpiasa am-pitetezana hiatrika ny fantson-drano mitete. haingana ary miantoka ny fandidiana azo antoka ny tambajotra fanafanana.
JWELL insulated fantsom-pamokarana fantsom-pamokarana
1.The extruder dia mampiasa famolavolana vaovaon'ny volo tokana mahomby, mampahafantatra ny haitao mandroso indrindra hanamboarana avy any ivelany. Motera mandeha motera, fikirakirana Siemens PLC, miantoka ny fiasan'ny fitaovana azo antoka sy azo antoka. Ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny Host dia misy ny rafitra fanaraha-maso Siemens PLC sy ny modely fanitarana. Ny fifehezana ny mari-pana dia azo fehezina amin'ny ± 0.5 ° C.
2.Ny bobongolo dia mampiasa rafitra miolikolika, fanamafisam-peo vita amin'ny vy tsara kalitao; Ny fifehezana ny mari-pana amin'ny lasitra bobongolo dia mampiasa hafanana elektrika .Ny fifehezana ny mari-pana dia manana fatra avo lenta, ny fantsom-by varahina mitarika menaka dia tsy hampiangona karbaona. Ny peratra fanamainana dia mizara amin'ny faritra bebe kokoa, ny fanitsiana ny mari-pana amin'ny faritra tsirairay amin'ny bobongolo dia azo fehezina.
3. Ny tanky vacuum dia famolavolana modular. Ny flange ny boaty fametrahana banga sy ny boaty spraycooling dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny nozera dia mandray ny typejoint fanovana haingana, izay mety amin'ny fanadiovana sy fanoloana, ary maharesy ireo lesoka misy ny fametrahana sy ny fanaparitahana raikitra.
4. Karazan'ahitra ahodin-tseroka, mora ampiasaina izy io, tsy mandany fantsona, ary miasa be, miasa miorina tsara.
5. Ny sandrin'ny masinina manapaka dia mandray rafitra vy, tanjaka avo ary mateza.
Hatramin'ny nanombohany, Shanghai JWELL Pipe Equipment Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny filan'ny mpanjifa, miampy ny tombotsoan'ny fitaovana fantsona mandroso any an-trano sy any ivelany, nitady fitaovana avo lenta lafo vidy ho an'ny tsena, ary mila filàna teknolojia tsy mitsaha-mitombo amin'ny mpanjifa, mampiditra teknolojia famokarana mandroso sy foto-kevitra famolavolana mandroso ho an'ny mpanjifa terminal.
HIVERINAManampy amin'ny fananganana toeram-piompiana an-dranomasina maitso ny Jwell Machinary!
NEXTAndramana soa aman-tsara ny tsipika fantsom-pifandraisana Super PPR Fiber Glass